Head – Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဗောက်ထတာက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ။ ဆောင်းတွင်းမှာ ဗောက်ထတာ ပိုအဖြစ်များတဲ့အတွက် သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ Lin Lin (FB) A. ဗောက်ထတယ်ဆိုတာက ဆရာမတို့အရေပြားက အောက်ခြေလွှာကနေ ဆဲလ်တွေအပေါ်ကို တက်လာတယ်။ အပေါ်လွှာရောက်လာချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ကြောင့်...
နာတာရှည် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ စွဲကပ်ခြင်း
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဝေဒနာတွေအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. ခေါင်းကိုက်တာက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တချို့က ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တယ်၊ တချို့က ခေါင်းတစ်ခုလုံး ကိုက်တယ်၊ တချို့ကလည်း ဇက်ကြောတက်ပြီး ခေါင်းကိုက်တယ်၊ တချို့ကလည်း ခေါင်းထဲမှာ ထုံကျဉ်ပြီး ဆတ်ခနဲကိုက်တယ်၊...
ခေါင်းချွေးအထွက်များတယ် . . . .
မေး ။ ခေါင်းချွေးထွက်များတာ ဘာဆေးသောက်ရင် ကောင်းမလဲ။ Soe Min Aung (FB) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ ခေါင်းချွေးထွက်တာ သက်သာစေဖို့ ရေများများသောက်ပါ။ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပါ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။...
မကြာ မကြာ ခေါင်းကိုက်တတ်ပါက ဆန်းစစ်သင့်သည့် အပြုအမူများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူတွေမှာ အဖြစ်များဆုံး နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာထဲမှာ ခေါင်းကိုက်တာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ – သွားမကြိတ်ပါနှင့် အစာစားတဲ့အခါကလွဲရင် သွားတွေကို ကြိတ်နေတတ်တဲ့ အကျင့်မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သွားတွေကို မကြာခဏကြိတ်ဝါးနေတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ – မျက်ခုံးပင့်တတ်သည့်အကျင့်ကို ဖျောက်ပါ မကြာခဏမျက်ခုံးပင့်တတ်တဲ့...
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရပြီဆိုရင် ဘာအလုပ်ကိုမှမလုပ်ချင်၊ မကိုင်ချင်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာက လူအတော်များများမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ဖြစ်လာရင်လည်း စိတ်မသက်မသာနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာ အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကို အကြံပြုပါရစေ။ သဘာဝကုထုံး (၁) အချိုမှုန့်...
ရက်ခြား ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့ ဝေဒနာ
မေး. မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်အသက် ၂၅ နှစ်ပါဗျ။ ကျွန်တော့်မှာ ရက်ခြား ရက်ခြား မကြာမကြာ ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့ ဝေဒနာဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဟာ ဘယ်လိုရောဂါမျိုးတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဒေါက်တာ။ ဘယ်လို ဆင်ခြင်ပြုမူ နေထိုင်သင့်ပါသလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးအကြံပြု ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ဗျ။ ဟန်မင်းမောင်...